Innovative Toys Fekitori - China Innovative Toys Vagadziri uye Vatengesi
Nyika yematoyi inonakidza, kwete chete yevana asiwo vanhu vakuru vanofarira kuzorora kubva kune chaiko nyika. Isu tiri timu yevanogadzira uye vakasarudzika nyanzvi avo vanogadzira inokwezva uye yekutanga-mu-kirasi zvigadzirwa zvitsva gore rega. Kusanganisira mapurasitiki / esimbi fidget spinner, epurasitiki fidget cube, magnetic fidget mhete yekudzora kushushikana & kushushikana kubasa, pamwe nezvidhinha zvekusimudzira kugona kwevana. Iine yepamusoro-giredhi uye yakasimbiswa zvinhu, yakachengeteka, yakasimba uye inogara-kwenguva refu. Tevedzera kune akawanda akaomarara matoyi zviyero, kusanganisira EN71, USA ASTM F963, Taiwan ST neJapan ST, uye zvinoenderana neCPSIA muganho wekutungamira uye phthalates. Zvinhu zvakasiyana zvinosangana nezvinodiwa zvakasiyana. Chero kufarira, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Tiri kukwanisa kuunza zvakanakisa zvekunakidzwa, kudzidza uye tekinoroji pamwechete kuti tipe chigadzirwa chinotyisa.
Tsika Yekusimudzira Plush Keychain
PU Furo Nyoro Svina Sokisi
Mhuka Mufananidzo Toys
Zinc chiwanikwa Fidget Spinner
Plastiki Fidget Spinner
Chigunwe Kufungidzira Keychain